रुपन्देहीमा हेर्नुहोस्।.... सीतालाई श्रीमानले ज'लाएको आ'रोप ! जलेकी सीता, रहिनन् यो दुनियामा - Microlink Media::News Media Website
रुपन्देहीमा हेर्नुहोस्।…. सीतालाई श्रीमानले ज’लाएको आ’रोप ! जलेकी सीता, रहिनन् यो दुनियामा
रुपन्देहीको तिलोत्तमा घ’टना सेलाउन नपाउदै अर्को घ’टनामा अर्की सिता परेकी छिन। रुपन्देहीमा श्रीमतीलाई आ”गो ल’गा’एर ह”त्या गरेको आ’रो’प’मा श्रीमान पक्रा’उ परेका छन् । जिल्लाको कञ्चन गाँउपालिका–५ उत्तर भैसाहीकी २९ वर्षीय सिता थारु भदौ २५ गते राति आफ्नै कोठामा आ”गला”गी हुँदा ग”म्भी”र घा”इ”ते भएकी थिइन् । आ”गो”लागीबाट गम्भी’र घा”इते भएकी थारुलाई उपचारका लागि पाल्पाको मिशन अस्पतालमा लगिएको थिए ।
थारुको उ’प’चारको क्रममा बुधबार मृ”त्यु भएको इलाका प्र’हरी कार्यालय सालझण्डीका प्रहरी निरीक्षक दिवाकर रिजालले बताए । माइति पक्षले ज्वाईले आ”गो लगाएर छोरीको ह”त्या गरेको भन्दै प्रहरीमा बुधबार जा’हे’री दिएका थिए । माइती पक्षले ह”त्या भएको भन्दै प्रहरी समक्ष जाहेरी दिए पछि प्रहरीले सिताका श्रीमान् २९ वर्षीय रञ्जित थारुलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि पक्रा’उ गरिएको प्र’हरी निरीक्षक रिजालले बताए ।
‘माइती पक्षबाट ह”त्या भएको भनेर जाहेरी दर्ता भएको छ ।’ प्रहरी निरीक्षक रिजालले भने ‘प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भए लगत्तै मृ’त’क सिताका श्रीमानलाई बुधबार नै पक्राउ गरिएको छ र आवश्यक अनुसन्धान गर्नका लागि अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिएको लिएका छौँ। सीतालाई श्रीमानले ज’लाएको आ’रोप ! जलेकी सीता, रहिनन् यो दुनियामा। रुपन्देही जिल्लाको कन्चन गाउपालिका ५ उत्तर भैसाई भन्ने गाउमा एक दु’खद घ’टना घटेको छ। जहा आफ्नै श्रीमानले श्रीमती आ’गोमा ज”लि’रहादा पनि बचाउन तर्फ लागेनन।
सिताको नि’धन पछि उनका छिमेकी मिडिया मा आएका छन्। सिता धेरै नै सोजी थिइन्। हामि माछा मा’र्ने जात भएपनि माछा मा’र्न जाने क्रममा सिताले हामि सामु आफ्नो केहि पि’डा सुनाईनन। सितालाई भित्रभित्रि धेरै नै पिडा भएको रहेछ। जस्तो घर मा भएपनि मैले गरेर खानु पर्छ , बुबा आमाले दिएको घर हो म इजेतले बस्नु पर्छ भनि सिताले कसैलाई केहि नभनी बसेको रहेछिन। बाहिरि रुपमा धेरै नै माया गर्ने उनलाई भित्र धेरैनै या’तना दिने रहेछन।
हामि छिमेकी भएपनि उनले हामीलाई कहिल्यै आफ्नो पि’डा भनिनन। उनलाई जति पि’डा भएपनि मन मै राख्ने गर्दो रहेछिन। सिता जल्ने दिन रातिको साढे आठ बजेको समयमा लाइन गएको थियो हामीले गर्मि भएको हुनाले बाटोमा निस्किएका थियौ। सितालाई पनि जाम गर्मि छ भन्दा मेरो नानि सुतेको छ म गए भने पंखा हम्किने मान्छे कोहि छैन म जादिन तपाईहरु जानुस तपाईहरु मोटो हुनुहुन्छ अलि दुब्लाउनु हुन्छ कि भनिन र हामिहरु गयौ। त्यो रात के भयो थाहा छैन ,अर्को दिन बिहान ७ बजे प्र’हरी आए। हामीलाई त्यस घ’टना बारे केहि पनि थाहा छैन।
हामि तीनजना पनि गयौ र सीताको नन्दलाई तपाईको घरमा यस्तो घ’टना भएको रहेछ प्रसासन पनि आएको रहेछ हामि छिमेकीलाई केहि थाहा छैन भनि प्रश्न गर्यौ। उनले भनीन कि भनेनम कसैलाई पनि ज’ल्नु भएको छ अब लाग्ने त होलानी भनि उत्तर आयो। सिताको श्रीमान्ले प्र’हरी बयानमा चुरोटको ठेतोले आ’गो लागेको भनेपनि स्थानीयले मानेका छैनन्। त्यो जाबो चुरोटको आ’गो त जसले पनि निबाउन सक्छ।
माइतीलाई पनि ज्वाइको अवस्था थाहा पाएपछि उनले छोरिलाई घरमा नराख्ने मितिमै राख्ने भने पनि सिताका श्रीमान्ले घरमै लिएर आएका थिए। श्रीमतीको नि’धन भएपछि पनि त्यस परिवारले छिमेकि संग केहि पनि कुरा गरेका रहेनछन्। छोरीको मृ”त्यु पछि पनि माइतिपक्षलाई एक कल फोनमा समेत भनेका रहेनछन्सिता र उनको श्रीमान सासु परिवार सबै संग झग’डा कहिल्यै भएन उनीहरुको भित्र त् कस्तो थियो थाहा छैन बाहिर धेरै नै राम्रो थियो। सधै मिलेर बस्ने गर्थे। शबको अवस्था हेर्दा ह”त्या गरेको जस्तो देखिन्छ ,संगै सुतेको श्रीमानले श्रीमती जलेको देख्दा बचाउन पर्ने हो तर त्यो भएन। श्रीमानले चुरोटले म’रेको हो भन्छन तर त्यो होइन ,कि डिजल ,मट्टीतेल ले ज’लाएको हुनुपर्छ।